PlatiniumCoin စျေး - အွန်လိုင်း PNC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို PlatiniumCoin (PNC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ PlatiniumCoin (PNC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ PlatiniumCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ PlatiniumCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
PlatiniumCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PlatiniumCoinPNC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0208PlatiniumCoinPNC သို့ ယူရိုEUR€0.0175PlatiniumCoinPNC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0158PlatiniumCoinPNC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0189PlatiniumCoinPNC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.187PlatiniumCoinPNC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.131PlatiniumCoinPNC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.46PlatiniumCoinPNC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0773PlatiniumCoinPNC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0276PlatiniumCoinPNC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0288PlatiniumCoinPNC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.465PlatiniumCoinPNC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.161PlatiniumCoinPNC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.111PlatiniumCoinPNC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.56PlatiniumCoinPNC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.5PlatiniumCoinPNC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0285PlatiniumCoinPNC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0312PlatiniumCoinPNC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.647PlatiniumCoinPNC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.144PlatiniumCoinPNC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.19PlatiniumCoinPNC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩24.65PlatiniumCoinPNC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦8.07PlatiniumCoinPNC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.53PlatiniumCoinPNC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.576
PlatiniumCoinPNC သို့ BitcoinBTC0.000002 PlatiniumCoinPNC သို့ EthereumETH0.00005 PlatiniumCoinPNC သို့ LitecoinLTC0.000345 PlatiniumCoinPNC သို့ DigitalCashDASH0.000204 PlatiniumCoinPNC သို့ MoneroXMR0.000222 PlatiniumCoinPNC သို့ NxtNXT1.49 PlatiniumCoinPNC သို့ Ethereum ClassicETC0.00289 PlatiniumCoinPNC သို့ DogecoinDOGE5.87 PlatiniumCoinPNC သို့ ZCashZEC0.000215 PlatiniumCoinPNC သို့ BitsharesBTS0.791 PlatiniumCoinPNC သို့ DigiByteDGB0.768 PlatiniumCoinPNC သို့ RippleXRP0.0675 PlatiniumCoinPNC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000699 PlatiniumCoinPNC သို့ PeerCoinPPC0.0739 PlatiniumCoinPNC သို့ CraigsCoinCRAIG9.24 PlatiniumCoinPNC သို့ BitstakeXBS0.865 PlatiniumCoinPNC သို့ PayCoinXPY0.354 PlatiniumCoinPNC သို့ ProsperCoinPRC2.55 PlatiniumCoinPNC သို့ YbCoinYBC0.00001 PlatiniumCoinPNC သို့ DarkKushDANK6.5 PlatiniumCoinPNC သို့ GiveCoinGIVE43.91 PlatiniumCoinPNC သို့ KoboCoinKOBO4.52 PlatiniumCoinPNC သို့ DarkTokenDT0.0191 PlatiniumCoinPNC သို့ CETUS CoinCETI58.55